स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्डम बाँड्ने, गृह मन्त्रालयले अपराधी ठान्न्ने ? – Hamrosandesh.com
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्डम बाँड्ने, गृह मन्त्रालयले अपराधी ठान्न्ने ?
नेपाल एउटा सानो देश हो । यो थोरै मात्रामा शहरी एरिया रहेको गाउँ नै गाउँले घेरिएको, प्राकृतिकरुपमा अत्यन्तै सुन्दर सफल मुलुक हो । विगतमा महिला भनेको घरभित्रै चुलो चौकोमा सीमित हुनुपर्ने जातका रुपमा लिईन्थयो भने अहिले देश विकास र निर्माणका क्रममा आधा हिस्सा ओगटेका महिलाको पनि सबै क्षेत्रमा बराबरी हुनुपर्ने विषयमा कानुनीरुपमै व्यवस्था हुँदै आएको छ ।
राज्यले मानवीयरुपमा सबै मानिसलाई हेरोस् र यौनकर्मी महिला पनि यही देश र समाजका नागरिक हुन् भन्ने कुरा नविर्सियोस् । समस्यालाई सम्बोधन गर्न अघि बढन्पर्छ । आज नेपाल समाचारपत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्डम बाँड्ने, गृह मन्त्रालयले अपराधी ठान्न्ने ? पुरुषकै कारण यौनकर्मी बन्दा सजाय किन महिलालाई मात्र ? शिर्षकमा खबर छापिएको छ ।
होटल रेस्टुरेन्टमा यतिजना महिला कन्डसहित समातिए, आपत्तिजनक अवस्थामा समातिए भनिरहँदा त्यहाँ जाने पुरुष को थिए भन्ने किन सार्वजनिक गरिन्न ? यौनजन्य कार्यमा महिलामात्र हैन पुरुष नै पहिला जान्छन् र महिलालाई बाध्य पार्छन् । यौनको प्यास मेटाउन यौनकर्मी महिलाको खोजी गर्दै पुग्छन् र आफ्नो काम सकेपछि महिलालाई विभिन्न लान्छना लगाए कन्डमसहित पक्राउ गरेको भने बदनाम गर्छन् ।